၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲ မဲခွဲမှုနှင့် မဲအိုးများအကြောင်း သိကောင်းစရာများ - Sports Home Time
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘောလုံးရာသီအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်မဲခွဲမှုကို သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၀း၃၀ နာရီကစပြီး တူရကီနိုင်ငံ အစ္စတန်ဘူလ်မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်စုအဆင့်ကို ဝင်ရောက်ထားတဲ့ အသင်းများ
ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးချန်ပီယံ မန်စီးတီးနဲ့ လီဗာပူး၊ ယူနိုက်တက်တို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်။ လက်ရှိချန်ပီယံ ချယ်ဆီးအသင်းဟာ မဲအိုး ၁ ကနေ ပါဝင်ခွင့်ရပါမယ်။
လာလီဂါမှ အက်သလက်တီကို၊ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်၊ ဆီးဗီးလာတို့ ပါဝင်ခွင့်ရထားပါတယ်။ ဗီလာရီးရဲလ်ကလည်း ယူရိုပါလိဂ် ချန်ပီယံအဖြစ် မဲအိုး ၁ ကနေ ပါဝင်ခွင့်ရပါမယ်။
စီးရီးအေမှ အင်တာမီလန်၊ ဂျူဗင်တပ်၊ အတ္တလန်တာ၊ အေစီမီလန်တို့ ပါဝင်ခွင့်ရထားတယ်။ ဘွန်ဒက်လီဂါမှ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်၊ လိုက်ဇစ်၊ ဒေါ့မွန်နဲ့ ဝုဒ်ဘတ်တို့ဖြစ်ကာ ပြင်သစ်လိဂ်ကနေတော့ လိုင်လီနဲ့ ပီအက်စ်ဂျီတို့ ပါဝင်ခွင့်ရထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်စုအဆင့် ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် ၃၂ နှစ်သင်းကို ဦးစားပေးများအလိုက် မဲအိုး ၄ အိုး ခွဲထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်သီးလိဂ်တွေမှ အမှတ်ပေး ချန်ပီယံအသင်းတွေ၊ ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ချန်ပီယံအသင်းတွေက မဲအိုး ၁ မှာ ပါဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မဲအိုးတူ အသင်းများချင်းနဲ့ တစ်နိုင်ငံတည်း အသင်းများချင်းကတော့ အုပ်စုအဆင့်မှာ တွေ့ဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Pot 3: Porto, RB Leipzig, Ajax, Atalanta, RB Salzburg, Benfica, Zenit Saint Petersburg, Shakhtar
Pot 4: Brugge, AC Milan, Young Boys, Besiktas, Dynamo Kiev, Malmo, Wolfsburg, Sheriff Tiraspol
အုပ်စုအဆင့်ပွဲတွေကို စက်တင်ဘာလ ၁၄-၁၅ ရက်ကနေ ဒီဇင်ဘာလ ၇-၈ ရက်နေ့ထိ ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်။
အုပ်စုတွင်း ပွဲစဉ် (၁) စက်တင်ဘာလ ၁၄-၁၅ ရက်
အုပ်စုတွင်း ပွဲစဉ် (၂) စက်တင်ဘာလ ၂၈-၂၉ ရက်
အုပ်စုတွင်း ပွဲစဉ် (၃) အောက်တိုဘာလ ၁၉-၂၀ ရက်
အုပ်စုတွင်း ပွဲစဉ် (၄) နိုဝင်ဘာလ ၂-၃ ရက်
အုပ်စုတွင်း ပွဲစဉ် (၅) နိုဝင်ဘာလ ၂၃-၂၄ ရက်
အုပ်စုတွင်း ပွဲစဉ် (၆) ဒီဇင်ဘာလ ၇-၈ ရက်
ဗိုလ်လုပွဲကို ဘယ်နေရာမှာ ကျင်းပမှာလဲ?
ဒီရာသီအတွက် ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲကိုတော့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ရုရှားနိုင်ငံ စိန့်ပီတာဘက် ကွင်းကြီးအတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ ကွင်းဟာ ရုရှားကလပ် ဇင်းနစ်အသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်းဖြစ်ကာ ပရိသတ်ပေါင်း ၆၈၀၀၀ ဝင်ဆံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။
(=> 2014 ခုနှစ်တည်းက စတင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး #ShweCasino => အချိန်မရွေး တစ်စက္ကန့်မျှ စောင့်ဆိုင်းစရာ မလိုပဲ ကိုယ်တိုင်ငွေသွင်းငွေထုတ်ပြုလုပ်နိုင်သည့် Online Payment System => အပတ်စဉ် ကံစမ်းမဲငွေသားလက်ဆောင်များ နှင့် Bonus ငွေသားလက်ဆောင်များ => မကြာခင် ကမ္ဘာတဝန်းမှ ဘောလုံးပွဲများကိုပါ စိတ်ကြိုက် ကစားနိုင်ပါတော့မည်။ (Viber => 09 969 710 910 ; Facebook – https://bit.ly/2SMe4CC | App – https://bit.ly/3hgFuKg )
ZAWGYI – ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ေဘာလံုးရာသီအတြက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္မဲခြဲမႈကို ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၁၀း၃၀ နာရီကစျပီး တူရကီႏုိင္ငံ အစၥတန္ဘူလ္မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
အုပ္စုအဆင့္ကို ဝင္ေရာက္ထားတဲ့ အသင္းမ်ား
ပရီးမီးယားလိဂ္ အမွတ္ေပးခ်န္ပီယံ မန္စီးတီးနဲ႔ လီဗာပူး၊ ယူႏုိက္တက္တို႔ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္ကို ကိုယ္စားျပဳျပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္ျပိဳင္ပြဲကို ပါဝင္ ယွဥ္ျပိဳင္မွာျဖစ္တယ္။ လက္ရွိခ်န္ပီယံ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ မဲအိုး ၁ ကေန ပါဝင္ခြင့္ရပါမယ္။
လာလီဂါမွ အက္သလက္တီကို၊ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္၊ ဆီးဗီးလာတို႔ ပါဝင္ခြင့္ရထားပါတယ္။ ဗီလာရီးရဲလ္ကလည္း ယူရိုပါလိဂ္ ခ်န္ပီယံအျဖစ္ မဲအိုး ၁ ကေန ပါဝင္ခြင့္ရပါမယ္။
စီးရီးေအမွ အင္တာမီလန္၊ ဂ်ဴဗင္တပ္၊ အတၱလန္တာ၊ ေအစီမီလန္တို႔ ပါဝင္ခြင့္ရထားတယ္။ ဘြန္ဒက္လီဂါမွ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္၊ လိုက္ဇစ္၊ ေဒါ့မြန္နဲ႔ ဝုဒ္ဘတ္တို႔ျဖစ္ကာ ျပင္သစ္လိဂ္ကေနေတာ့ လိုင္လီနဲ႔ ပီအက္စ္ဂ်ီတို႔ ပါဝင္ခြင့္ရထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အုပ္စုအဆင့္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မယ့္ ၃၂ နွစ္သင္းကို ဦးစားေပးမ်ားအလိုက္ မဲအိုး ၄ အိုး ခြဲထားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိပ္သီးလိဂ္ေတြမွ အမွတ္ေပး ခ်န္ပီယံအသင္းေတြ၊ ခ်န္ပီယံလိဂ္နဲ႔ ယူရိုပါလိဂ္ ခ်န္ပီယံအသင္းေတြက မဲအိုး ၁ မွာ ပါဝင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
မဲအိုးတူ အသင္းမ်ားခ်င္းနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံတည္း အသင္းမ်ားခ်င္းကေတာ့ အုပ္စုအဆင့္မွာ ေတြ႔ဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
အုပ္စုအဆင့္ပြဲေတြကို စက္တင္ဘာလ ၁၄-၁၅ ရက္ကေန ဒီဇင္ဘာလ ၇-၈ ရက္ေန႔ထိ ယွဥ္ျပိဳင္မွာျဖစ္တယ္။
အုပ္စုတြင္း ပြဲစဥ္ (၁) စက္တင္ဘာလ ၁၄-၁၅ ရက္
အုပ္စုတြင္း ပြဲစဥ္ (၂) စက္တင္ဘာလ ၂၈-၂၉ ရက္
အုပ္စုတြင္း ပြဲစဥ္ (၃) ေအာက္တိုဘာလ ၁၉-၂၀ ရက္
အုပ္စုတြင္း ပြဲစဥ္ (၄) ႏိုဝင္ဘာလ ၂-၃ ရက္
အုပ္စုတြင္း ပြဲစဥ္ (၅) ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃-၂၄ ရက္
အုပ္စုတြင္း ပြဲစဥ္ (၆) ဒီဇင္ဘာလ ၇-၈ ရက္
ဗိုလ္လုပြဲကို ဘယ္ေနရာမွာ က်င္းပမွာလဲ?
ဒီရာသီအတြက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲကိုေတာ့ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ရုရွားႏိုင္ငံ စိန္႔ပီတာဘက္ ကြင္းၾကီးအတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္တယ္။ အဆိုပါ ကြင္းဟာ ရုရွားကလပ္ ဇင္းနစ္အသင္းရဲ႕ အိမ္ကြင္းျဖစ္ကာ ပရိသတ္ေပါင္း ၆၈၀၀၀ ဝင္ဆံ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ်သူမှ မကြိုက်တဲ့ အကျတွေမှ ခေါ်ယူလို့ရနေတဲ့ အသင်းလို့ အာဆင်နယ်ကို ပေါမာဆန် ဝေဖန်